FAQs - UJade Technology Co., Ltd
Ebuzwa ukuba Inkampani
Njani ukuqinisekisa umgangatho iimveliso zenu?
Siye saseka kwitsheyini sonikezelo ogqibeleleyo iqulathe kubathengisi ezigqwesileyo filtrated ngokungqongqo nemveliso ngamnye kuvavanywe ngaphambi kokuba efektri yethu iya.
Ingaba unayo nayiphi na iziqinisekiso apho kuyimfuneko kurhwebo lwethu?
Ewe, zonke iimveliso zethu ETL / CETL / CE / ROHS / CEC aqinisekisiwe. Kwakhona isicelo isatifikethi ekhethekileyo siyafuneka emarikeni yakho.
Ingaba ukunikeza iisampulu? ngaba simahla okanye akunjalo?
Iisampulu ziyafumaneka kuwe, kodwa kufuneka ihlawulwe. Enkosi ukuqonda yakho ngobubele.
Njani malunga ngokwemiqathango intlawulo?
T / T ngoyena kucetyiswa, PayPal / Western Union / LC kunye neminye imiqathango yentlawulo nazo zamkelekile
Ngaba wenze OEM kuthi?
Ewe, siya kunika OEM, ODM, OBM ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zeshishini lakho.
Njani na iwaranti yakho?
Sibonelela kunye iinyanga ezili-12 iwaranti ukususela impahla ushiye efektri yethu. Sinikeza kunye zokumaketha ixesha elide emva kwentengiso inkxaso, injineli yobungcali kuya kunceda ukuncoma iimveliso ezininzi ezifanelekileyo emva kokufunda iimfuno zabathengi bakho, yaye yenza umxube nangokubhekisele izicelo zakho ezizodwa
Ebuzwa for Products
Kutheni imisebenzi yam pump ngengxolo enkulu kunye motor abe shushu kakhulu?
Kudla oko kubangelwa ukuthuthwa ngogonyamelo, le bents shaft plane likhuhla kunye stator xa ngeemoto isebenza. Nceda khangela ukuba iphakheji zikwimeko entle xa pump ifikelela kuwe.
Yini na impompo wam kokha amanzi luncinane?
Ukuba impompo yenza ingxolo engaqhelekanga xa ngenkankulu kokha amanzi, nceda ibattery impompo kwaye ujonge ukuba impeller ke wanamathela yi ngamatye kancinane. Oku kwenzeka wakha emachibini ezintsha xa ufaka impompo ngaphandle ecocekileyo amatye amancinane. Ukuba akukho ingxolo engaqhelekanga, nceda khangela ukuba sele ifakiwe kakuhle, oku kwenzeka xa izixhobo zakho cleaner lutshitshe.
My impompo motor elinyukayo, kwenzeka njani oko?
Nceda khangela ukuba engalunganga igxunyekwe le ombane kwi impompo ombane ezimbini.